Muuri News Network » DAAWO VIDEO: R/Wasaare ku xigeenka Sweden oo ka ilmeysay go’aanka adag ee Qaxootiga laga qaatay
DAAWO VIDEO: R/Wasaare ku xigeenka Sweden oo ka ilmeysay go’aanka adag ee Qaxootiga laga qaatay
Nov 25, 2015 - Comments off
Shalay ayey aheyd markii xukuumadda Sweden shaacisay in la hirgelinayo sharuuc lagu yareynayo qaxootiga waddanka soo gaaraya waxaana arrintaasi ay ka ilmeysiisay raysul wasaare kuxigeenka gabadha lagu magacaabo Åsa Romsson oo shirjaraa’id oo la qabanayey ay ku muujisay sideey ugu xun tahay balse aysan waxba ka qaban karin.
Go’aankii shalay ay xukumadda Sweden ku dhawaaqday ee ahaa in Sweden yarayneyso qaxootiga ay qaabilayso waxaa cad in uu ahaa mid aan sahlanayneyn in ay caqbasho ra’iisalwasaare ku xigeenka Sweden Åsa Romson iyo xisbigeeda Miljöpartiet.
Shalay markii iyada iyo ra’iisalwasaaraha wadojir u qabteen shir saxaafadeed go’aankaan lagu shaacinayey ayey ilmo ku soo istaagtay indhaha Åsa Romsson iyadoo codku gariirayana waxay sheegtay in go’aankan yahay mid xanuun badan balse lagama maarmaan ah.
– Si daacad ah haddaan u hadlo, waqtiyadii ugu denbeeyey doodo badan ayaan ka galay xaqiiqada sida ay u ektahay. Todoobadyadii ugu denbeeyeyna waxaa ku qancay in go’aankan yahay kan ugu haboon ee aan ku caawin karno wakiiladeena degmooyinka ee xisbiga Miljöpartiet.
Kaddib markii shir saxaafadeedkii soo dhamaaday ayey Romson ku tilmaamtay go’aanka xukumada ”go’aan aad u daran”.
– Go’aankani waxuu ahaa go’aan aad u daran ayey tiri mar ay u warameysay wakaaladda wararka ee TT.
Waxayna tiri go’aankan waxuu hubal la’aan ku ridayaa qoysas badan oo hadda ka bacdii filan karin dib in ay ugu midoobaan Sweden ama ay helaan sharci deganaansho oo rasmi ah.
Mar la weydiiyey Romson sababta xisbigeeda Miljöpartiet oo isku sheega in uu yahay xisbi u roon qaxootiga, aysan dowladda uga baxin haddii go’aanka yahay mid sidaas u daran, waxay ku jawaabtay: